Voice Journal ရဲ့ ရှယ်ဖွချက် နှင့် အတွေးများ ( ၃ ) ( အဆ တစ်ထောင် ကွာတော့ ဘာဖြစ်လဲ ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » Voice Journal ရဲ့ ရှယ်ဖွချက် နှင့် အတွေးများ ( ၃ ) ( အဆ တစ်ထောင် ကွာတော့ ဘာဖြစ်လဲ )
Voice Journal ရဲ့ ရှယ်ဖွချက် နှင့် အတွေးများ ( ၃ ) ( အဆ တစ်ထောင် ကွာတော့ ဘာဖြစ်လဲ )
Posted by Foreign Resident on Oct 27, 2011 in Creative Writing | 16 comments
Voice Journal ရဲ့ ရှယ်ဖွချက် နှင့်
အတွေးများ ( ၃ )
ထုံးစံအတိုင်း ပါပဲ ။
Captain America ရဲ့
Comment ကို Reply လုပ်တာ ။
Post ကြီး ဖြစ်သွားပါတယ် ။
သည်းခံ ကြပါအုံး ရွာသားတို့ရေ ။
” အဲဒီတော့ Australia အစိုးရ က
မြန်မာ အစိုးရ က 2075 ကျပ်
အဆ တစ်ထောင် ( အဆ တစ်ထောင် )
ကျော်ကွာတာကို တွေ့ရတယ် “
” သြဇီ နဲ.ကျွန်တော်တို.ဗမာနိုင်ငံနဲ.တော့
ယှဉ်လို့မှ မရတာဦးဖော၇ယ် “
အော် Captain America ရယ်
သြဇီ မှာနေနေ ရွှေ မှာနေနေ
ချီးကုန်းတဲ့ ဒုတ်ခနောင်း လောက်တောင်
ကိုယ်တွေ အကြီးမို့ တော်ယုံ
အနာခံ လျှော့ပေးလိုက်မယ် မရှိဘူး
သတ်မယ် ဆိုတာကြီးပဲ ထွီ )
ဟင် ဘယ်တွေရောက်ကုန်ပါလိမ့် ။
အစက ပြန်စမှ ရတော့မယ် ။
လူတွေချည်းပဲ မဟုတ်ဘူးလားဗျာ ။
လူချင်းအတူတူ သြဇီ မှာနေတဲ့လူက
ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး ရွှေ မှာနေတဲ့လူကျ
ငရဲ ပြည်မှာ နေတဲ့လူလိုဖြစ်ရသတုံး ။
Captain America လဲ မြန်မာပြည်မှာ မွေးတယ်
အဘ လဲ မြန်မာပြည်မှာ မွေးတယ်
မြန်မာပြည်မှာ မွေးတာချင်း အတူတူ
အဘက ဒီဖက်ကျွန်း ခဏလေးရွေ့နေတာနဲ့
ခံစားခွင့် ကချက်ချင်းကြီး ဘဇာကြောင့်
အဆ တစ်ထောင်တောင် ကွာသွားရတာတုန်း ။
50 % ပိုများတယ် ။ တစ်ဆ ပိုများတယ် ။
နှစ်ဆ ပိုများတယ်ထိ အဘ လက်ခံတယ် ။
ကုန်ကုန်ပြောရရင် လူလူချင်း ဆယ်ဆ ကွာတယ် ဆိုရင်တောင် လွန်လှပြီ ။
ဘောက်မဲ့ကြောင့် အဆ တစ်ထောင်ကျော် ကွာသွားရတာတုန်း ။
အခုဟာက လူ နှင့် ခွေး ကွာတာထက် ဆိုးနေပြီ ။
ဒီအချိုးက နတ်ပြည် နှင့် ချီးတွင်း ကွာသလောက်ရှိနေပြီ ။
အဘတွေ့ရသလောက် ဒီကျွန်းမှာလည်း ပဒေသာပင် မပေါက်ပါဗျာ ။
သြဇီ ကလူတွေက နတ်လောက်နီးနီး တော်နေပြီဆိုရင်လည်း ။
ဒီလောက်တောင် သူ့အရည်အချင်း သူ့တန်ခိုးကို ထင်းထင်းကြီးပြနိုင်နေပြီပဲ ။
အိမ်မှာရှိတဲ့ မင်းမဟာဂီရိ မင်းကြီး မင်းလေး နတ်ရုပ်တွေဖယ်ပြီး ။
” သြဇီ နတ်မင်းကြီး ” ” အမေရိကန် နတ်မင်းကြီး ”
ဆိုပြီး မျက်နှာဖြူ နတ်ရုပ်တွေထုပြီး ကိုးကွယ် ကြပါတော့လား ။
ပြောလိုက်ရ မကောင်းဖြစ်ရော့မယ် ၊
အဲဒါကမှ အကျိုးထူးဖို့ ပိုသေချာသေးတယ် ။
အဘမှာသာ ရင်နင့်ပြီးတော့ မျက်ရည်ကျရတယ်
မြန်မာပြည်က လူတွေက ထူးပြီးတော့ ခံစားမိပုံ မပေါ်ပါဘူး ။
အဘကလည်း ရွာသူ ရွာသား တွေကို သနားတာ မဟုတ်ရပါဘူး ။
အင်တာနက်သုံးတယ် ဆိုကတည်းက သိပ်မဆိုးနိုင်ဘူး တွက်ပြီးသား ။
အဆ တထောင် ဆိုတဲ့ ကိန်းဂဏ္ဍာန်း လဲထွက်လာရော ။
အခု အဘ ဒီမှာ အလကားနေရင်း ရနေတဲ့
ကျန်းမာရေး ပညာရေး လူမှုဖူလုံရေး အခွင့်အရေးတွေ နှင့်
ဟိုတခါ ဓါတ်ပုံထဲမှာ မြင်မိတဲ့
” ပညာရေးဖြင့် ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော
နိုင်ငံတော်ကြီး တည်ဆောက်အံ့ ” ဆိုတဲ့
ဆိုင်းဘုတ်ကြီး ချိတ်ထားတဲ့ အမိုးမလုံ အကာမလုံ
ရေစပ်မှာ ဆောက်ထားတဲ့ ယိုင်နဲ့နဲ့
တဲကုတ်ကုတ် စုတ်စုတ် ကလေး ပြေးမြင်တာပဲ ။
ဝမ်းနည်းလိုက်တာလေ ရင်ထဲကိုဆို့တက်လာတယ် ။
အဘ သြဇီ ရောက်ရောက်ချင်း မိန်းမက ဆေးခန်း ခေါ်သွားပြီး
တကိုယ်လုံးကို Check up လုပ်ပြစ်တာဗျ ။
ဆီး ဝမ်း သွေး သလိပ် တင်မကဘူး နားကြားတာပါ စစ်ပြစ်တာ ။
ပိုက်ဆံ ဘယ်လောက်ကုန်တတုန်း ဟုတ်လား ။
တစ်ပြားစေ့ တစ်စေ့တောင် မပေးရပေါင်ဗျာ ။
Medicare ဆိုတဲ့ ကဒ်ပြားလေးပြလိုက်ယုံပဲ ။
Check Up လုပ်နေတဲ့ အချိန်တွေမှာ
မိန်းမနှင့်ပဲ ဝင်စစ် Result တွေ ပြန်ပြ လုပ်ရတာ
တစ်ခါတွေ့ ၃၅ ဒေါ်လာနှုန်းနှင့် သုံးခါအတွက်
မိန်းမ ကတောင် ဒေါ်လာ တစ်ရာ လောက်ရလိုက်သေး ။
အဲဒီလို Medical Check Up မျိုးက ၆ လ တစ်ခါလောက် လုပ်ရတယ် ။
မယားက သူ့လင်ကို တကိုယ်လုံး Medical Check up လုပ်တာကို
တစ်ပြားမှ မပေးရတဲ့ အပြင် မယားကို ဒေါ်လာ တစ်ရာ ပြန်ပေးတဲ့ တိုင်းပြည် ။
တိုင်းသူပြည်သား တစ်ယောက်ယောက်များ သူများ နိုင်ငံမှာ အဖမ်းခံရရင်
ဝန်ကြီးတွေ လွှတ်တော်အမတ်တွေ သံအမတ်ကြီးတွေ လွှတ်ပြီး
သူ့နိုင်ငံသားကို မရအရ ကယ်ထုတ်တဲ့ တိုင်းပြည် ။
တိုင်းသူပြည်သား တွေအပေါ် လွှတ်ကောင်းတဲ့ တိုင်းပြည် ။
ဘာတွေမှန်းတောင် မမှတ်မိလောက်အောင် ထိုးရတာ ။
နိုင်ငံခြား တစ်ခါထွက်ခါနီးရင်လည်း ထွက်မယ့် နိုင်ငံပေါ်မူတည်ပြီးထိုး ။
ရာသီတခါပြောင်းတိုင်းလဲ ရိုးရိုး Flu ကတစ်ခါ H5N1 ကတစ်ခါ ။
ခဏကြာ Flu က Trend ပြောင်းသွားလို့ဆိုပြီး နောက်တခါ ။
အေး အဘ တစ်ခါထိုးတိုင်း
အဘ မိန်းမကတော့ ၃၅ ဒေါ်လာ မှန်မှန်ရနေတာပေါ့ ။
ပေါက်ပေါက် ရှာရှာဆို ၊
မိန်းမ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေးက
ယောက်ကျားရဲ့ လိင်အင်္ဂါ ကြွက်နို့လည်း ကာကွယ်တယ် ဆိုပြီး
အဘမှာ အိုကြီး အိုမ နှင့် လူကြားမကောင်းပါဘူးကွာ ငြင်းတာ မရပါဘူး
ယောက်ကျားကြီးတန်မဲ့ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေးက
ဝယ်ပြီးထိုးရတာ ဆေးပါတ်လည် သုံးလုံးထိုးရတာ
ဒေါ်လာ ၃ဝဝ လောက်ကျသွားတယ် ။
အဖိုးကြီး အဖွားကြီးတွေများ နှာစေးလို့ ဆေးခန်း ပြတာတောင်
ကိုယ်ဖာသာကိုယ် ရိုးရိုး မပြဘူး Taxi ခ သက်သာအောင် ဆိုပြီး
ငါ ဒူးနာနေတယ် ဆိုပြီး Ambulance ကိုဖုန်းဆက် ခေါ်ပြီး သွားတာ ။
ဟိုက Ambulance နှင့် Paramedic နှစ်ယောက်က
ပြေးလာ ဆေးခန်းပို့ရတယ် ။
ဒီမှာက အဖိုးကြီး အဖွားကြီး နှင့် အလုပ်လက်မဲ့တွေဆို
Ambulance ခ မပေးရဘူးလေ ။
အဖိုးကြီး အဖွားကြီး နှင့် အလုပ်လက်မဲ့ တွေဆို
တနှစ်ကို ဆေးစရိတ် ဒေါ်လာ ၅၀၀ ကျော်သွားရင်
ကျော်သမျှ အစိုးရကစိုက်တယ် ဆေးတင်မကဘူး စက်ပါဝယ်ပေးတာ ။
အသက်ရှုမှန် စက်ကအစ အစိုးရက
တစ်ဦးခြင်းစီကို ဝယ်ပေးတယ် ။
တနှစ် ဆေးဖိုး ပုံမှန် သိန်းတရာလောက်ရှိတယ် ။
ဒေါ်လာ ၅၀၀ ကျော်သွားတာ မှန်သမျှ အကုန် အစိုးရက စိုက်တယ် ။
Carer ကို အစိုးရစရိတ် နှင့်ငှားပေးတယ် ( တစ်လ ဒေါ်လာ ၃၅၀၀ နှင့် ) ။
ဈေးထွက်ဝယ် အိမ်သာ ရေချိုးခန်းရှင်း အကုန် Carer ကလုပ်ပေးတယ် ။
ရွာသားတို့ရေ ဆက်ရေးရင် ကုန်မှာ မဟုတ်တော့ဘူး ။
အဆ တစ်ထောင် ကွာတယ်ဆိုတာ အဲဒါတွေ ပါပဲ ။
အဲလို အဆ တစ်ထောင် ကွာတော့ ဘာဖြစ်လဲ ဟုတ်လား ။
ခပ်လွယ်လွယ် Result တစ်ခုပဲ ထုတ်ပြမယ်
ကျန်တာတွေ မပြောတော့ဘူး ရှုပ်လို့ ။
Life Expectancy ( ပျဉ်းမျှ လူ့သက်တမ်း )
5. Australia = 81.2 years
148. Myanmar = 62.1 years
အဆ တစ်ထောင် ကွာတော့
လူ့သက်တမ်းမှာ နှစ် ၂၀ ပြတ်ကျန်ခဲ့တာပေါ့ဗျာ ။
ဒါတောင် ကျန်းမာရေး တစ်ခုပဲပြောသေးတာ ။
လူမှုဖူလုံရေး နှင့် အလုပ်လက်မဲ့ခံစားခွင့် အကြောင်း မပြောသေးဖူး ။
အဲဒီ အပိုင်းမှာဆိုရင် သေချာတယ် အဆ တစ်ထောင် မဟုတ်ဘူး
အဆ တစ်သောင်း အနဲဆုံး ကွာစေရမယ် ။
တော်ဘီ ၊ ဆက်ပြောရင် ရွာသားတွေ အကုန်
Australia ရောက်လာလိမ့်မယ် ။
အဘတောင် နေရာမလောက်လို့ ဖယ်ပေးနေရအုံးမယ် ။
မြန်မာပြည်က လူတွေက ထူးပြီးတော့ ခံစားမိပုံ မပေါ်တဲ့အချိန်မှာ
အဘက ဘာကြောင့် ရင်နင့်ပြီးတော့ မျက်ရည်ကျရတယ် ဆိုတာ အဲဒါပဲ ။
အဘက နေ့တဓူဝ လူဆိုတာ ဘယ်လို နေရ စားရတယ် ဆိုတာ သိနေတာကိုး ။
ရွာသားတို့ရေ ကြိုးစား ရုန်းထွက် ကြပါဟ ။
အဘ လက်ညိုး ထိုးနေကျ ဒေဝဒါတ် ကြီး ကိုလည်း
ဘာမှဆက်ထိုးချင်စိတ် မရှိတော့ပါဘူး ။
လက်ညိုး သာ ထိုးရင်းနှင့် ပုတ်သွားမယ် သူက
ရတာလေးနဲ့ ၀အောင်စား ၊ရှိတာလေးနဲ့ လှအောင်ဝတ်ပြီးကျေနပ်နေတာ FRေ၇းမှ ငိုချင်လာပြီ၊
ရုန်းထွက်ဖို့ အစွမ်းအစမရှိတဲ့ အ တုံး အ အ လေးတွေပါ။ (မရှက်မကြောက် ၀န်ခံလိုက်ပါသည်။)
ဦးကြီးFR က “မြန်မာပြည်က လူတွေက ထူးပြီးတော့ ခံစားမိပုံ မပေါ်တဲ့” အတွက် ရင်ထုမနာဖြစ်နေပုံရတယ်ထင်ပါရဲ့…
ပြောရရင် ဒီလိုနေလာရတာ မြန်မာတစ်ပြည်လုံး “အရေထူ” နေကြပါပြီ အရေမထူရင်တောင် မှိုင်းမိပြီးဘာမှမမြင်မကြားနိုင်တော့ မခံစားတတ်တော့တာထင်ပါတယ်…
ကျွန်တော်လဲနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေကိုမရောက်ဖူး… မြန်မာပြည်သူတွေအများစုကလဲ မရောက်ဖူးကြတော့ ကွဲလွဲချက်တွေကို ဂဂဏဏ မခံစားဖူးကြတဲ့အတွက် လက်တွေ့ ခံစားနေတဲ့လူတွေထက်တော့ ရုန်းထွက်ဖို့ကြိုးစားလိုစိတ်နဲမှာပါ….
ဒီနေရာမှာလဲ “လူချင်းတူပေမဲ့ အသက်ရှူပုံချင်းကွဲ” တယ်ဆိုတာကြီးက… တဲ့တိုးကြီးဖြစ်နေမလားမသိပါ…
လောက်ကောင်တွေအဖြစ်မွေးလာတော့လဲ ချေးတွင်းက ပျော်စရာကြီးပဲဖြစ်နေလေတော့သလား…
ဘ၀ကိုဘယ်လမ်းကနေ တက်ရမယ်ဆိုတာတောင် တိတိကျကျမရှိတဲ့ မြန်မာလူငယ်အများစုနဲ့တစ်ကိုယ်ရေတစ်ကာယ ရပ်တည်ဖို့ တောင် ကျားကုတ်ကျားခဲကြိုးစားနေကြရတဲ့အချိန်မှာ ဒီ နိုင်ငံနဲ့ ချီတဲ့ “နိုင်ငံတိုးတက်ရေး.. တစ်မျိုးသားလုံးကောင်းစားရေး” အတွေးတွေကတော့ လက်လှမ်းဝေးလွန်းလှသလိုပါပဲ…
လက်လှမ်းဝေးတယ်ဆိုတာ က အခုအချိန်တွေမှာ ဂိမ်းဆိုင်တွေထဲမှာ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေမှာပဲ အချိန်ဖြုံးတာများ ပြီး နိုင်ငံထဲ စစ်ဖြစ်နေမှန်းလဲမသိ… ဘာအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်ပြီး ဘယ်ကိုဦးတည်နိုင်တယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့လူမရှိ….
နိုင်ငံ့အရေးတွေနဲ့ လူငယ်တွေ လက်လှမ်းကွာလွန်းတယ်မြင်မိလို့ ပါ…
အငဲ သီချင်းပဲ ဆိုပြတော့မယ်ဗျာ။
ရည်ရွယ်ရာ ကင်းမဲ့လို့ လမ်းမသိခဲ့ချိန်
(မှတ်ချက်။ ။ အငဲ ၏ လမ်းပြပါဦး အလိုက်နှင့် ဆိုရန်)
အားပါးပါး။ အားရစရာကြီးပါလား အဘရာ။
မသိတာပဲ ကောင်းပါတယ် အဘ FR ရယ် …
လူ့ပြည်နဲ့ နတ်ပြည်လိုပေါ့ … လူ့ပြည်မှာနေတဲ့သူတွေက ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့သတိရသေးလို့ ကုသိုလ်တွေနေ့တိုင်းရနိုင်ပေမယ့် နတ်ပြည်မှာနေသူတွေက သိပ်ချမ်းသာလွန်းလို့ ကုသိုလ်လုပ်ဖို့ သတိမရနိုင်တာနဲ့ မေ့လျော့နေတတ်သလိုပေါ့ …
မြန်မာပြည်မှာနေရတာ လောကဓံတွေခံရလွန်းလို့ သံဝေဂတရားရနိုင်ဖို့ အလွန်နီးစပ်ပါသဖြင့် တရားနဲ့မွေ့လျော်နိုင်တဲ့ နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ အကောင်းဖက်က ဖြည့်တွေးချင်ပါတယ် ….
Australia နိုင်ငံဆိုတာလဲ တကယ်တော့ မူလဒေသခံတွေ တည်ထောင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး
လူဖြူ(ကော့ကေးရှန်း) တွေ တည်ထောင်ခဲ့တာမို့သာ ဒီလောက်စံနစ်ကောင်းနေတာလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
-အကျိုးအပြစ်ကို ခွဲခြားနိုင်တယ် (စိတ်ခံစားမှု့ဦးစားပေးတာထက်..)
-လူလူချင်းပိုလေးစား ပိုစည်းလုံးတယ် (သူတို့အနေနဲ့ လူသာအဓိက..)
-တန်းမြင့်တဲ့လူတော်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်မှတ်တဲ့မာနမျိုး(vanity) ရှိလို့
မဟုတ်တာ မကောင်းတာ မသင့်တာ ကိုတဦးချင်းငြင်းပယ်တတ်တဲ့ အရှက်အကြောက်မျိုး ရှိတယ်။
ဆရာကြီး အရူးထပြီး လူဖြူတွေကို အမွှန်းတင်တာမဟုတ်လောက်ဘူးလို့ တွေးမိလို့
ဒီလူမျိုးတွေရဲ့အထင်ကြီးစရာ၊ အားကျစရာ၊ အတုယူစရာတွေကို မြင်မိတယ်။
ခက်တာက ကျောင်းမှာ စာသင်ခန်းမှာကျတော့ သူတို့က
သမိုင်းတရားခံ လူယုတ်မာ မိစ္ဆာဒိဌိကုလားဖြူတွေအဖြစ် သင်ကြရပြီး
လှည့်မကြည့်ချင်လောက်အောင် ရွံကြောက်ကြီး ဖြစ်စရာ ဖြစ်နေပြန်ရော။
တစ်ခါ သမိုင်းအဖြစ်မှန်တွေကိုပဲ သင်တယ်ဆိုဦးတော့ ကျောင်းသားတွေကို
ရှု့ဒေါင့်ပြောင်းသင်ကြားခဲ့တော့ (ကုလားဖြူတွေ လက်နက်သာတာကိုအလေးထားမပြောပဲ
မြန်မာစစ်သည်တွေ အသေခံတိုက်တဲ့သတ္တိကို အမွှန်းတင်ပြတာမျိုး)
…ကျုပ်တို့တွေ သမိုင်းသင်ခန်းစာတွေကနေ ရစရာကိုမရပဲ
“ အ ” ခဲ့ကြရပါတယ်။
အဲဒီအပင်ကအသီးကို ကျုပ်တို့ ဒီကနေ့စားနေကြရတာပါ….။
ကျုပ်တို့ကရော နောင်လာနောက်သားတွေအတွက် ဘာအပင်ပြန်စိုက်ခဲ့မှာလဲ …???
(ကိုဖေါရင်းရေ – ကွန်မင့်ရေးရင်း ပိုစ့်နဲ့တော့ လွဲသွားပြန်ပြီထင်တယ်။ ဆောရီးနော..)
နေတတ်ရင်ကျေနပ်စရာတွေကြီးပါ …..မြန်မာနိုင်ငံမှာလို ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ နေလို့မရတာတွေအများကြီးပါပဲ..
ဟုတ်ပ မောင်ရင် NK ရာ။
F.R ကြီး မြန်မာပြည်မှာ နေရတဲ့ အရသာကို ဘာမှ မသိပဲ ရမ်းပြောနေတာ။
ဒို့ မြန်မာပြည်လောက် စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ နေလို့ ရတာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘယ်နိုင်ငံရှိသေးလို့ လဲနော။
နေတတ်ရင် ကျေနပ်စရာပါ။ အချိန်တန်ရင် မိန်းမလုပ်စာ ထိုင်စားရုံပဲ။
မနက်ကို လဖေ့ရည်လေး ထွက်သောက်မယ်။ မုန့် ဟင်းခါးလေးစားမယ်။ မနက်ခင်းဂျာနယ်လ်
ဖတ်မယ် မစားရ၀ ခမန်း လေပေါမယ်။ ပြီးရင် အိမ်ပြန်ပြီး တရေးတမောပြန်နှပ်မယ်။
နိုးလာရင် မိန်းမ မနက် အလုပ် မသွားခင်ချက်သွားတဲ့ ထမင်းဟင်းလေး စားလိုက်ရုံပဲ။
တွေ့ ကရာ ကွမ်းထွေးလို့ ရတာလဲ ဒို့ နိုင်ငံ။ ကွမ်းယာဆိုင်က လူဦးရေနဲ့ တိုက်ရိုက် အချိုးကျ
လာဖို့အလားအလာတွေရှိနေတာလည်း ဒို့ နိုင်ငံ။ မိန်းမတွေပဲ အလုပ်လုပ်တာလည်း ဒို့ နိုင်ငံ။
အသက်လေး ၅၀ နားကပ်လာရင် အိမ်ဦးခန်းမှာ အပူဇော်ခံနိုင်တာလဲ ဒို့ နိုင်ငံ။
အသက် ၃၀ ကျော် အထိ မိဘဆီမှာ ကပ်နေပြီး လက်ဖြန့် တောင်းလို့ ရတာလည်း ဒို့ နိုင်ငံ။
သူတောင်းစား ယူနီဖောင်း (အနီ၊အ၀ါ၊အညို) တွေ ၀တ်ပြီး တောင်းလို့ ရတာလဲ ဒို့ နိုင်ငံ။
အကြားအမြင် တန်ခိုးရှင်တွေ ပေါတာလည်း ဒို့ နိုင်ငံ။ ဘုရား ဆင်းတု ကားပေါ်တင်ပြီး
မျောက်ပြ ဆန်တောင်း အဖြစ်မျိုး လုပ်လို့ ရတာလည်း ဒို့ နိုင်ငံ။ သူတစ်ပါး ဒုက္ခရောက်စေချင်
ရင် မေတ္တာများများပို့ လို့ယူဆထားတာလည်း ဒို့ နိုင်ငံ။ အိပ်၊စား၊ကာမ လောက်ပဲ သိတဲ့
ဦးရေကတဖြည်းဖြည်း တိုးပွားနေတာလဲ ဒို့ နိုင်ငံ။ ပြောရရင် စာအုပ်တစ်အုပ်လောက် ဂုဏ်
တွေ များပြားတဲ့ ဒို့ နိုင်ငံကြီးများ မောင်ရင် ပြောသလို နေတတ်ရင် ကျေနပ်စရာပါ။
နိုဇိုမီတော့ နိုင်ငံရေးတွေ ပါနေပြီ။
“ ပေါက်ပေါက် ရှာရှာဆို
ထိုးလိုက်ရသေး ။ ” ဆိုတာကို မြင်ရတော့
ကျုပ် တို့၁၀တန်းကျောင်းသား မြန်မာစကားပြေ ထဲက အလောင်းစည်သူမင်းကြီး ပြောတဲ့
“ ငါ မအိုသေး ” ဆိုတာကို ပြေးမြင်မိသဗျို့ 
အဘဖော အခုလို အသေးစိတ်ပြောပြမှပဲ သြဇီနိုင်ငံသားတွေရဲ့ ရပိုင်ခွင့် ခံစားပိုင်ခွင့်တွေကို သိရတယ်..
မိုးနဲ့မြေ ကွာသလိုကို ကွာတာပဲ…… လူချင်းတူပေမဲ့ အသက်ရှုပုံခြင်း ကွဲတယ်ဆိုတာ လတ်စသတ်တော့ ဒီလိုကိုး…..
ဒါနဲ့ အဘဖော နိုင်ငံသားတွေကရော အခွန်ကို ဘယ်လို ပေးဆောင်ရတယ်ဆိုတာလေးလည်း အသေးစိတ်ပြောပြပါအုန်း…. အမေရိကန်မှာ ဆောင်ရတဲ့ အခွန်ဥပဒေ တို့ ဘာတို့ နဲ့ အတူတူပဲလား….
အခွန်မထမ်းပဲ ရှောင်ရင်ရော ဘယ်လို ဥပဒေတွေနဲ့ အရေးယူတာလဲ….
အလုပ်လက်မဲ့ တွေ ဘာတွေတော့ ဒီပုံတိုင်းဆို ရှိမယ်မထင်ဘူး…
ပြောရမှာ ရှည်ရင် အဘဖောရေ ထုံးစံအတိုင်း အသစ်တပုဒ်သာရေးတင်လိုက် … အဲ့ဒါမှ အကျယ်တ၀င့် သိရမှာ…….နွားခြေရာခွက်ထဲက လူဆိုတော့လည်း တော်ရုံတန်ရုံနဲ့ မမြင်တတ်လို့ အသေးစိတ်ရေးပြပါနော်.. အဘဖော…
သိတယ် အဘဖောရေ အဘပြောချင်တဲ့အဓိပါယ်ကို…ပို(စ်)ကလည်းကျွန်တော့်
“မင်းတို.ဆင်းရဲတယ် ဆင်းရဲတယ်ပဲပြောနေကြတယ် ငါ့လို
ဘာမှပြန်မပြောနိုင်ရှာဝူး ပါးစပ်အဟောင်းသားလေးနဲ.ငေးကြည့်နေရ ရှာတယ်
ကျွန်တော်တို.ဗမာပြည်ရဲ့အခြေအနေကိုအဘ နှစ်၁၀၀ လောက်အထိဘက်ပြန်ဆွဲကြည့်လိုက်
အဆင့်တောင်မရှိဝူးဆိုတာနားလည်ဒယ်။ကျွန်တော်အဲဒီအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာနေ နေ တော့အဲဒီ
အကြောင်းတွေပိုသိပီး ပိုသိတယ်။သူတို.တွေရဲ.အတ္တတွေ ငါ့ဖို. ငါ့မိန်းမဖို. ငါသားသမီးဖို. ငါ ငါ ငါ ငါ